घरहरू निर्माण मा सिप प्यानल प्रयोग
हाम्रो समय मा, निर्माण बजार निरन्तर त्यहाँ कुनै पनि नयाँ वस्तुहरू छ। विशेष, सिप प्यानल यस्तो सस्ता माल गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। यो सामाग्री मात्र होइन किनभने विशेष डिजाइन को, तर पनि किनभने यसको असाधारण गुण को रोचक छ।
कसरी सामाग्री गर्छ
सबै सिप प्यानल दुई मा प्रबन्ध OSB (उन्मुख Strand), जो बीच polystyrene फोम गुणस्तर को एक पत्र छ। वास्तवमा, यो नै जीएसपी छ, तर एक "सैंडविच" को रूपमा डिजाइन गरिएको छ। केही गल्ती यी प्लेट गर्न "बन्द नातेदार" chipboard छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो त छैन। उत्तरार्द्ध विपरीत तिनीहरू कम ग्रेड बनाइएका छैनन् बर्बाद उत्पादन, र विशेष तयार पातलो चिप्स देखि। यसबाहेक, निर्माण समयमा, एक विशेष कृत्रिम राल, वरपरको हावा formaldehyde vapors मा जारी गर्दैन।
रूपमा अविश्वसनीय यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा, यो सामाग्री विशाल लोड withstanding सक्षम छ। विशेष मा, निर्माता एक वर्ग मीटर अप गर्न दस टन भार सामना गर्न सक्छन् भनेर रिपोर्ट! जबकि अन्य फर्श ईटा र ठोस को निर्माण हुनेछ यो, मानक, "ख्रुश्चेव," पहिलो तल्ला सिप प्यानल बनेको थियो भने जस्तै बारेमा छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सामाग्री को fragility गुनासो छैन।
विक्षेपन मा पनि धेरै टिकाउ छन्। एक प्यानल सजिलै सिप प्यानल बनेको घरहरू निर्माण एक ओभरले रूपमा प्रयोगको सुझाव भनेर, टन को एक जोडी को वजन सामना गर्न सकेन। तथापि, केही यस सन्दर्भमा थप विशेष तिनीहरूले घमण्ड गर्न सक्दैन। बरु, प्यानल उत्कृष्ट इन्सुलेट गुण र राम्रो मध्यम तीव्रता को यातायात हल्ला अवशोषित गर्न सक्छन्। यसको विपरीत, एउटै डीएसपी, तिनीहरूले चिस्यान र यांत्रिक क्षति transcend, तिनीहरूले धेरै ग्रस्त छैन।
तिनीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ
हामी पहिले नै भनेका छन् को रूप मा, सिप देखि प्यानल घरहरू असामान्य परियोजनाहरू छैनन्। तिनीहरूले बाहिरी र असर पर्खालहरु, छत, ढोका र विन्डो खुलने को निर्माण को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, हामी तिनीहरूलाई को फर्श बीच मिल्दाजुल्दा गरिरहेको लायक छैनन् भन्न चाहन्छु। तिनीहरूले तल्लो फर्श मा भाडादारों जबरजस्ती ड्रम को प्रभाव, सिर्जना भन्ने तथ्यलाई माथिल्लो छिमेकी देखि हल्ला "आनन्द"। तर आफ्नो प्रयोगले अटारी तल्ला लागि पूर्णतया जायज छ।
को ठूलो फाइदा सिप प्यानल तिनीहरूलाई आधा मस्यौदा संस्करण बिना एक "सफा" राख्न भन्ने तथ्यलाई छ। तपाईं उसलाई सीधा राख्न सक्छ लिनोलियम, laminate वा को छत। पर्खालहरु लागि, सबै त्यस्ता सामाग्री को प्रयोग यो लागि वास्तवमा आदर्श छ। बस सप्ताह को एक जोडी तपाईं घर सङ्कलन र यसलाई बनाउन सक्छ को भित्री ट्रिम।
याद जग विभाग को जमीन मा जो दोहन, समाधान गर्न आवश्यक छ bolted जोइन्टहरूमा पहिलो कुना प्यानल सुरक्षित छ। स्क्रू लम्बाइ - छैन 20 भन्दा कम सेमी, र यो एङ्कर प्रयोग गर्न मनमोहक छ। उच्च गुणस्तरीय फोम को मद्दतले सबै अंतराल मा ध्यान भर्नुहोस्। भित्र मा पर्खालहरु, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ , plasterboard देखि सजाउनु सबै एउटै विधानसभा फोम र स्क्रू यसलाई fastens। पर्खाल को इन्सुलेशन लागि थप सामाग्री प्रयोग वैकल्पिक उनि पनि एक तापमान -50 डिग्री सेल्सियस सामना सम्मान।
को धुने विधानसभा फोम
Aerated ठोस वा फोम ब्लक? सामाग्री कैरेक्टराइजेशन
संरचना सिमेन्ट-बालुवा मिश्रण
प्रत्यक्ष मनोरञ्जन संग चेल्याबिन्स्क रेस्टुरेन्ट: नाम, ठेगाना, समीक्षा
यो आणविक परिवार - आधुनिक समाज को आधार
कसरी वजन घरमा छिटो गुमाउन? , व्यायाम आहार: वजन कसरी गुमाउन
पहाडी lyre। houseplants
तपाईं कति फूलहरू दिन सक्नुहुन्छ? जन्मदिन को लागि फूलहरु को गुलदस्ता
काठ को फर्श: माउन्ट प्रविधि, उपकरण र सिफारिसहरू
"Trachisan" चक्की। प्रयोगको लागि निर्देशन, विशेष बच्चाहरु मा प्रयोग
Rubicon - यो के हो? शताब्दीयौंको मार्फत जोडतोडले
"Mulata" - पट्टी Barricadnaya: विवरण, ठेगाना, समीक्षा